Nhau - Unoda simba rakawanda, asi nekukurumidza? Iyi nyowani yekuchaja tech GaN inoti inogona kuendesa
Unoda mamwe masimba, asi nekukurumidza? Iyi nyowani yekuchaja tech GaN inoti inogona kuendesa
Mazuva ekukomberedza akakomberedza zvidhinha zvikuru zvemagetsi netambo dzakawanda kuti zvishandiso zvako zvigare pamusoro zvinogona kunge zvichipera. Kumirira maawa kuti yako smartphone kana Laptop kubhadharisa, kana kushamiswa nechaja inotyisa inotyisa, zvinogona zvakare kuve chinhu chekare. GaN tekinoroji iri pano uye inovimbisa kuita zvese zviri nani
"Silicon iri kusvika pamiganhu yayo maererano nekugona uye masimba emagetsi," Graham Robertson, mutauriri weDigital Trends. "Saka, takawedzera tekinoroji yeGaN, inova element 31 uye element 7 yakasanganiswa kugadzira gallium nitride."
"Silicon iri kusvika pamiganhu yayo maererano nekugona uye masimba emagetsi."
Chikamu che "GaN" cheGaNFast chinomirira gallium nitride, uye chikamu che "Fast" chinoreva kumhanyisa kwakanyanya kumhanya. Navitas Semiconductors irikushandisa zvinhu izvi muma Power ICs (magetsi manejimendi akabatanidzwa maseketi), ayo ayo anotengesa kune vagadziri vechaja.
"Isu tinoisa dura pane yechinyakare silicon wafer uye izvo zvinotora mashandiro kumatunhu matsva nekumhanya nekukurumidza, kugona kukuru, uye kuwanda kwepamusoro," akadaro Robertson.
Simba rakakonzera kutemwa nemusoro kwemagetsi anotakurika kubva pazuva rekutanga. Kunyangwe nekumhanyisa kumhanya kwehunyanzvi muhunyanzvi hwepasi rose, tanga tichishandisa mabhatiri eiriyamu-ion, nezvose zvavanogumira, kwemakore makumi maviri nemashanu ikozvino. Izvi zvinoreva kuti mazhinji emidziyo yedu inotakurika haigone kuenda zuva pasina kuvharirwa mukati.
Kwatinoona hunyanzvi hwakawanda mumakore achangopfuura huri mukumhanyisa kumhanya kumhanya, asi kuendesa simba rakawanda nemashaja echinyakare zvinoda kuti zvive zvakakura uye zvinogadzira kupisa kwakawanda, kunova kupambadza magetsi. Sekureva kwaNavitas, GaNFast Power ICs inopa 3x yepamusoro simba, 40 muzana yakakura simba rekuchengetedza, uye 20 muzana yakaderera system system.
Iwo zvakare anowirirana neQualcomm's Kurumidza Kubhadharisa 4.0 kududzirwa, inova iri kuwanikwa izvozvi, uye inofanirwa kuenzana kusvika maawa mashanu ehupenyu hwebhatiri re smartphone kubva pamaminitsi mashanu ekuchaja. GaNFast inoshanda pamwe nePower Delivery yakatsanangurwa futi, ndiwo mafoni akajairwa seGoogle's Pixel 3 uye malaptop akaita saDell's XPS 13 vanovimba. Nekudaro, zvakakosha kuti uzive kuti madoko anogona kupa chero QC 4.0 kana PD, kwete ese ari maviri sekutyora USB-C PD kududzirwa.